Ingwadla kwabamnyama ngabazobulawa yi-COVID-19 - Ilanga News
Home Izindaba Ingwadla kwabamnyama ngabazobulawa yi-COVID-19
Ingwadla kwabamnyama ngabazobulawa yi-COVID-19
UMNGCWABO sekuphoqa ukuba uhanjelwe yidlanzana njengeminye yemigomo ebekiwe uhulumeni ukuzivikela njengoba kuqubuke ubhubhane, i-coronavirus.
ISAZOBHEKANA nosizi indlu emnyama ezolahlekelwa yizihlobo zayo ngalesi sikhathi ngenxa yobhubhane iCovid-19 njengoba iqinile imigomo okumele ilandelwe ebekelwe izinhlaka zokungcwaba nabashonelwe, ephoqa ukuba kushintshwe indlela ejwayelekile obekwenziwa ngayo izinto.
Imvamisa kuba nemikhutshana eyahlukene eyenziwa emakhaya ukuhlonipha isidumbu, kwazise kunenkolelo ethi lowo ongasekho, usuke eseyohlangana noyisemkhulu.
Lesi sikhathi kubuye kube ngesokuhlangana kwemindeni ekade yagcinana bezovalelisa okokugcina ilungu lomndeni seliyobekwa kobandayo.
Ukunyuka usuku nosuku kwezibalo zasebehaqwe yileli gciwane eseligasele nasemalokishini akuleli kwaze kwaphuma nezidumbu, kunyuse amaphaphu kwesatshelwa ukuthi lizobhubhisa.
Okuwusizi kakhulu wukuthi uma kukhona odlule ngenxa yalesi sifo, ngeke umndeni ukwazi ukubona isidumbu sakhe ukuzivikela ekuthelelekeni.
IMIGOMO YOSOMABHIZINISI BEZOKUNGCWABA
UNkz Nozipho Njilo, webhizinisi lokungcwaba, iThembalesizwe Funerals, uthe yize engakabhekani nesimo lapho kumele bayofihla umuntu odlule ngaleli gciwane, kodwa inhlangano ebhekelele abangcwabi, iSouth African Funeral Parlour’s Association (SAFPA), ibaqeqeshe ngokwanele ngolwazi yaphinde yabafundisa nangezinsiza abazidingayo ngalesi sikhathi.
Mayelana nokulandwa kwezidumbu emakhaya nasemakhazeni, uthe izisebenzi zabo zizofaka amagilavu nezifonyo zokuzivikela.
Unxuse imindeni eshonelwe ukuba ibathembe ukuthi baqeqeshiwe ukugeza izidumbu, kasikho isidingo sokuba ziphindwe zigezwe uma seziyiswa ekhaya.
“Ikhona vele imigomo ebekiwe yokuzivikela nokuqikelela inhlanzeko esisebenza phezu kwayo, okwenza kungabi yinto esixakayo njengoba sesiqwashisiwe ukuba siqaphele ngokwengeziwe siphinde silandele imiyalelo ethile ebekwe wuhulumeni,” esho.
Uvumile ukuthi kusazoba nzima kakhulu emindenini eminingi ukwamukela eminingi yale migomo ngenxa yezinkolelo ezahlukene njengokungasigezi isidumbu nokuthi ngeke sivulwe uma sesisekhaya.
Kumanje uthe badonswe ngendlebe ukuba bahlale befake izivikeli, okungamagilavu, ama-mask baphinde baphathe ama-sanitiser emathuneni.
Uthe okunye sekumele baphathe nebhuku okuzobhaliswa bonke abasuke behambele lowo mngcwabo ukuqinisekisa ukuthi isibalo sabo kaseqi ku-50.
INGWADLA YOKUSWELEKA KWAMATHUNA
Okubuye kuphakamise ukukhathazeka kakhulu, yingwadla yokushoda kwamathuna KwaZulu-Natal, ikakhulukazi eThekwini uma kungenzeka zenyuke izibalo zabashonayo, njengoba kwenzeka emazweni angaphandle ko-Italy lapho kufa izindimbane ngosuku.
Engqungqutheleni iPan African Cemeteries and Crematoria eyayingoMandulo (September) nyakenye eThekwini, kwavela ukuthi ezindaweni zamathuna eziwu-65 ezisabalele neTheku, sekusele eziwu-5 kuphela nazo esezizogcwala.
Ngaleso sikhathi kwathiwa ziwu-5 000 kuphela iziza zamathuna ezazisele kangangokuba kwathiwa umasipala umatasa ubheka izindawo ezizohlonzwa njengezikufanele ukuba namathuna. Phakathi kwazo kwabalwa iHammarsdale, yiCato Ridge naKwaVulamehlo.
Kwaphinde kwadingidwa ezinye izindlela zokungcwaba ezingaba yisixazululo kule nkinga, njengokulothiswa.
ISOUTH AFRICAN CEMETERIES ASSOCIATION IYAPHEFUMULA
USihlalo weSouth African Cemeteries Association (SACA), uMnu Pepe Dass, unxuse omasipala ukuba bahlale bevivile ukuze bangabhekani nengwadla yoku-ngazilungiseleli uma kwenzeka kwenyuka izibalo zabashona ngeCovid-19.
Uthe nakuba imizamo isikhona yokunqanda ukusabalala kwaleli gciwane, kodwa kunezingqinamba zenhlalo nomnotho ezenza kube nzima ukulandela le miyalelo.
Okudala lokhu uthe wukuthi zingaphezu kuka-5 million izakhamizi zakuleli ezihlala emikhukhwini nasesiminyaminyeni sasemalokishini, okungagcina kuyize ukulandela le migomo.
Uthe nokwenyuka kwezibalo usuku nosuku kuyizinkomba zokuthi zizokwenyuka nezibalo zabafayo okungagcina sekudala ingcindezi komasipala uma bengazilungiseleli kusemanje.
UMnu Dass uthe nakuba kuke kwaboniswana ngokulothiswa njengenye yezindlela ezingasetshenziswa, uthe lokhu kungabe sekuwukunyathela amalungelo ezenkolo namasiko abantu.
“Noma ngabe isimo siyaphoqa, kasinazo izindawo ezanele zokwe-nza lokhu,” kusho uMnu Dass.
Uthe kubalulekile ukuba omasipala baxoxisane ngesivumelwano nezisebenzi zabo zamathuna ngokuhambisana nemiyalelo yomnyango wezempilo. Uthe nabo banokwesaba ukuthi umuntu angashona ngokwemvelo engazazi ukuthi ubesengenwe yileli gciwa-ne, okungagcina sekuthelele izisebenzi zasemakhazeni.
IMIYALELO NEZINCOMO ZE-SACA UMA KULUNGISELWA UKUNGCWABA
* Incoma ukuba kwengezwe isikhathi sokubhukha sibe yizinsuku eziwu-7 evikini kusuka ngo-10 ekuseni kuya ku-3h30 ntambama. Uma kunezincwadi noma amapheshana adingekayo, kumele athunyelwe nge-email.
* Amathuna kumele aqhelelane ukugwema ukusondelana uma kunemindeni eyahlukene engcwabayo.
* Inkonzo yasemathuneni kakumele yeqe imizuzu ewu-30.
* Umyalelo kahulumeni wokusingathwa kwaleli gciwane elihlonzwe njengenhlekelele, uthi kakumele isibalo sabantu abahlanganayo seqe ku-50. I-SACA icebisa ukuthi bangeqi ku-20 abantu abaya emathuneni.
* Uma kuzosetshenziswa izindawo zomphakathi, kumele zihlanzisiswe ngezivikeli magciwane uma kade zisetshenziswa.
KUZOZWELA ENDLINI EMNYAMA
Nakuba isifo sifikisa usizi nezinyembezi, kodwa ukubona ilungu lomndeni wakho, umngani noma umuntu obesondele kakhulu kuwena lehla ngebhokisi, liyoshona emgodini, kuyaliletha ithemba lokuthi useyophumula koyise-mkhulu. Uyakhala, uvalelise, zome.
Ubucayi beCovid-19 nemigomo evikela ukutheleleka kuzoshiya kwabaningi isilonda esizohlale sibhibha njengoba kuthiwe lowo oshonile, akuvumelekile ukuba abonwe futhi yidlanzana kuphela okumele liye emathuneni, nakhona lisuke libekelwe isikhathi okumele lisichithe khona.
Esizweni esimnyama, amathuna kawathathwa njengendawo yokufihla isidumbu kuphela, kodwa kunendlela ethile enesizotha umuntu aphelezelwa ngayo, engeke isalandeleka ngenxa yale migomo. Imizamo yokuthola okhulumela umasipala weTheku iphunzile kwaze kwashaya isikhathi sokuloba.
Previous articleUfisa baqhubeke bayoncela ulwazi emawodini
Next articleumnikazi wejoyinti ubopha amaphoyisa